Mpamatsy rafitra famantarana ny takelaka fahazoan-dàlana, rafitra fijanonan'ny ANPR tsara indrindra
System Scanning ambanin'ny fiara
Torolàlana momba ny fiantsonan'ny fiara
an-trano > Products > Smart Parking
Ity sokajy ity dia momba ny fanehoana famariparitana momba ny fitaovana amin'ny vokatra video momba ny rafitra fiantsonan'ny fiara. Ny rafitra fiantsonan'ny fiara mazàna dia ahitana rafitra fitaovana marani-tsaina sy rafitra rindrambaiko miasa mba hiantohana ny fiasan'ny vokatra rehetra. Ho fanampin'izay, ampiana ny fanamafisana ny docking fandoavam-bola, izay mampitombo be ny faharanitan-tsaina AI amin'ny rafitra iray manontolo. Ity sokajy ity dia ahitana rafitra faneken'ny takelaka fahazoan-dàlana manan-tsaina, fiantsonan'ny alpr smart, tapakila marani-tsaina miaraka amin'ny rafitra lpr, rafitra fiantsonan'ny alpr marani-tsaina., sns.
TGW ALPR Fitantanana fiantsonan'ny fiara Fakan-tsary Famantarana Plate Fakan-tsary miaraka amin'ny fakan-tsary fanaraha-maso ip rindrambaiko
License Plate Recognition Teknolojia (License Plate Recognition, LPR) dia mifototra amin'ny teknolojian'ny informatika, ny teknolojia fanodinana sary, ary ny Fanekena manjavozavo mba hananganana ny toetran'ny maodely fiara, hamantarana ny toetran'ny fiara, toy ny Plate, modely, loko, sns Afaka manaisotra avy hatrany ny sarin'ny takelaka amin'ny sary, mampiasa ny teknolojia fanodinana sary mandroso, ny fanekena ny lamina sy ny faharanitan-tsaina amin'ny fampahalalam-baovao sy ny fanodinana sary voangona, dia azo fantarina ny laharan'ny takelaka fahazoan-dàlana, litera ary litera sinoa, ary omena mivantana. vokatry ny fanekena, mahatonga ny rafitra ho lasa zava-misy.Toetran'ny rafitra famantarana ny takelaka fahazoan-dàlana1. Afaka mamantatra lahatsoratra sy tarehimarika momba ny fahazoan-dàlana fiara2. Afaka mamantatra andalana iray sy tsipika roa laharan'ny takelaka fahazoan-dalana3. Afaka mahafantatra litera 0-2 sy isa 1 hatramin'ny 4 ho an'ny laharan'ny fiara4. Afaka mamantatra ny sinoa sy anglisy ny laharan'ny takelaka fahazoan-dàlana5. Ny angon-drakitra dia afaka mitahiry ny sary fisamborana, ny laharan'ny takelaka fahazoan-dàlana, ny laharan'ny lalana ary ny fotoanan'ny fiara amin'ny alàlan'ny firaketana.6. Ny laharan'ny takelaka fahazoan-dàlana fidirana sy fivoahana dia afaka mitatitra ny vokatra7. Manohana ny teny anglisy, koreana, sinoa tsotra sy sinoa nentim-paharazana ary fiteny hafa azo zahana.8. Haben'ny sary: ​​768*576 teboka9. haben'ny anoloana: 16*16-48*64 teboka10. zoro haavon'ny basy fakan-tsary: ​​ny zoro ambony indrindra 25 degre amin'ny lalan'ny fiara11. basy fakan-tsary mitsangana zoro: ny ambony indrindra zoro 25 degre amin'ny horizontaly12. Famirapiratana ambany indrindra: 500lux
IP LPR Camera licence plate recognition rafitra fiantsonan'ny fiara
Inona no atao hoe LPR (License Plate Recognition) Technology?LPR na ANPR (famantarana ny laharan'ny laharana mandeha ho azy)dia teknôlôjia mampiasa famantarana ny endri-tsoratra optika amin'ny sary mba hamakiana ny takelaka fisoratana anarana fiara mba hamoronana angona toerana misy fiara. Afaka mampiasa televiziona mihidy efa misy izy io, fakan-tsary fampiharana ny lalàna mifehy ny lalana, na fakan-tsary natao manokana ho an'ilay asa. Ny LPR dia ampiasain'ny polisy manerana izao tontolo izao ho fampiharana ny lalàna, ao anatin'izany ny fanamarinana raha toa ka misoratra na mahazo alalana ny fiara iray. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny famoriam-bola elektronika amin'ny lalana karama isaky ny fampiasana ary ho fomba fanaovana katalaogy ny fihetsiky ny fifamoivoizana, ohatra, ataon'ny masoivohon'ny lalambe.Azo ampiasaina hitahirizana ireo sary nalain'ny fakan-tsary sy ny lahatsoratra avy amin'ny takelaka fahazoan-dalana ny famantarana ny takelaka fahazoan-dalana, ary misy azo amboarina hitahiry ny sarin'ny mpamily. Mazàna no mampiasa jiro infrarouge ny rafitra mba ahafahan'ny fakan-tsary maka sary amin'ny fotoana rehetra na andro na alina. Ny teknolojia LPR dia tsy maintsy mandinika ny fiovaovan'ny takelaka isaky ny toerana.Ny tombony amin'ny teknolojia LPR:1. Ho an'ny Fitantanana Parking;2. Mamantatra ho azy ny soratra sy ny sarin'ny takelaka fiara;3. Mitsitsy ny sandan'ny asa sy ny fahasarotan'ny fitantanana amin'ny fitantanana ny toeram-piantsonan'ny fiara;4. Manatsara ny fahombiazan'ny fifamoivoizana;5. Fitantanana fiantsonan'ny fiara tsy misy kasety/tsy misy karatra;
Rafitra famantarana ny takelaka fahazoan-dàlana
Shenzhen TGW Technology Co., Ltd no mpanome vahaolana amin'ny fanaraha-maso ny fidirana ho an'ny rafitra fiantsonan'ny fiara manan-tsaina, ny rafitra fanekena ny takelaka fahazoan-dàlana ary ny fanaraha-maso ny fidirana amin'ny mpandeha an-tongotra ary ny famantarana ny tarehy
Rafitra fiantsonana marani-tsaina miaraka amin'ny lozisialy anpr
License Plate Recognition Teknolojia (License Plate Recognition, LPR) dia mifototra amin'ny teknolojian'ny informatika, ny teknolojia fanodinana sary, ary ny Fanekena manjavozavo mba hananganana ny toetran'ny maodely fiara, hamantarana ny toetran'ny fiara, toy ny Plate, modely, loko, sns Afaka manaisotra avy hatrany ny sarin'ny takelaka amin'ny sary, mampiasa ny teknolojia fanodinana sary mandroso, ny fanekena ny lamina sy ny faharanitan-tsaina amin'ny fampahalalam-baovao sy ny fanodinana sary voangona, dia azo fantarina ny laharan'ny takelaka fahazoan-dàlana, litera ary litera sinoa, ary omena mivantana. vokatry ny fanekena, mahatonga ny rafitra ho lasa zava-misy.
Rafitra fitantanana ny fidiran'ny fiara sy ny fivoahana amin'ny tapakila mafy sy malefaka
Rafitra fitantanana ny fidiran'ny fiara sy ny fivoahana amin'ny tapakila mafy sy malefakaNy rafitra fiantsonan'ny fiara lehibe dia misy.1. Rafitra fitantanana fiantsonan'ny carte de dispenser + mpamaky karatra.2. Rafitra fitantanana fiantsonan'ny mpizara tapakila + mpamaky karatra.3. RFID rafitra fitantanana fiara mandeha lavitra famakiana + RFID Etag.4. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) rafitra fitantanana fiara.Parking SystemIreo singa fototrafanamarihana(Dispenser karatra+ Mpamaky karatra)Fiara FiaraMachine Dispenser karatra& MpamakyMpitsidika vonjimaika:1. Ny mpitsidika dia manindry ny bokotra haka karatra avy amin'ny milina mpizara karatra fidirana dia hisokatra ho azy ny vavahadin'ny sakana.2. Rehefa mandalo ny fiara dia hikatona ho azy ny vavahadin'ny sakana.3. Rehefa miala ny mpitsidika dia mila mandoa ny saram-piantsonan'ny fiara ao amin'ny foibe fitantanana. Na mandoa vola amin'ny milina fandoavana fiara.(Vakio ny karatra ary kajy ny saran'ny fiara).4. Aorian'ny fandoavana dia manokatra vavahadin'ny sakana ny mpiasan'ny foibe mba hialan'ny mpitsidika. (Raha mandoa vola amin'ny milina fandoavana, averin'ny mpitsidika fotsiny ny karatra amin'ny milina fivoahana miaraka amin'ny mpandray karatra, dia hisokatra ho azy ny vavahadin'ny sakana.)5. Akatona ny vavahadin'ny sakana rehefa mandeha ho azy ny fiara.Mpampiasa maharitra:nandoa mialoha izy ireo ary nahazo ny karatra voasoratra. Afangarony fotsiny ny karatra eo amin'ny fidirana& milina fivoahana ary hisokatra ho azy ny vavahadin'ny sakana.Vavahadin'ny sakanaFoiben'ny Fitantanana Parking Ahitana Software, PC, Mpamokatra Karatra sns.milina fandoavana fiara (tsy voatery)(Dispenser tapakila + Mpamaky karatra )Rafitra fiantsonan'ny fiaraMachine Dispenser TicketMpitsidika vonjimaika.1. Ny mpitsidika dia manindry ny bokotra mba hahazoana tapakila amin'ny milina mpizara tapakila fidirana dia hisokatra ho azy ny vavahadin'ny sakana.2. Rehefa mandalo ny fiara dia hikatona ho azy ny vavahadin'ny sakana.3. Rehefa miala ny mpitsidika dia mila mandoa ny saram-piantsonan'ny fiara ao amin'ny foibe fitantanana. Na mandoa vola amin'ny milina fandoavana fiara.4. Aorian'ny fandoavana dia manokatra vavahadin'ny sakana ny mpiasan'ny foibe mba hialan'ny mpitsidika. (Raha mandoa vola amin'ny milina fandoavana, ny mpitsidika dia mijery fotsiny ny tapakila amin'ny milina fivoahana miaraka amin'ny scanner tapakila, dia hisokatra ho azy ny vavahadin'ny sakana.)5. Akatona ny vavahadin'ny sakana rehefa mandeha ho azy ny fiara.Mpampiasa maharitra: nandoa mialoha izy ireo ary nahazo ny karatra voasoratra. Afangarony fotsiny ny karatra eo amin'ny fidirana& milina fivoahana ary hisokatra ho azy ny vavahadin'ny sakana.Vavahadin'ny sakanaFoiben'ny Fitantanana Parking Ahitana Software, PC, Scanner Ticket, mpamaky karatra sns.milina fandoavana fiara (tsy voatery)RFID Car Parking SystemRFID ReaderHo an'ny mpampiasa maharitra ihany.1. Nandoa mialoha ny saram-piantsonan'ny fiara isam-bolana ny mpampiasa ary mahazo ny karatra RFID avy amin'ny foibe fitantanana.2. Apetaho amin'ny fitaratra ny karatra RFID ny mpampiasa.3. Rehefa mitondra ny fiarany akaikin'ny vavahady fidirana ny mpampiasa, ny mpamaky karatra eo am-bavahady fidirana dia hamaky ny karatra RFID amin'ny windshied lavitra.4. Rehefa mamaky dia hisokatra ho azy ny vavahadin'ny sakana.5. Rehefa mandalo ny fiara dia hikatona ny vavahadin'ny sakanaKaratra RFIDVavahadin'ny sakanaFoiben'ny Fitantanana Parking Ahitana Software, PC, Mpamokatra Karatra sns.Famantarana ny takelaka nomerao mandeha ho azy (ANPR)ANPR CameraHo an'ny mpitsidika vonjimaika:1. Rehefa mitondra ny fiarany akaikin'ny vavahady fidirana ny mpitsidika, ny fakan-tsary ANPR eo amin'ny vavahady fidirana dia haka sary ny takelaka fahazoan-dàlana ary hampiditra ny vaovao any amin'ny foibe fitantanana.2. Rehefa fantatra ny laharan'ny takelaka dia hisokatra ho azy ny vavahadin'ny sakana. Ary rehefa mandalo ny fiara dia hikatona ho azy ny sakana.3. Rehefa miala ny mpitsidika dia mila mandoa ny saram-piantsonan'ny fiara ao amin'ny foibe fitantanana. Na mandoa vola amin'ny milina fandoavana fiara.4. Rehefa mivoaka, ny fakan-tsary ANPR dia hahafantatra ny laharan'ny takelaka indray. Raha mandoa vola dia hisokatra ny sakana. Raha tsy vita ny fandoavam-bola dia tsy hisokatra ny sakana ary hampandrenesina ny PC.5. Rehefa mandalo ny fiara dia hikatona ny vavahadin'ny sakana.Mpampiasa maharitra: hosoratana eny amin’ny foibe ny laharan’ny takelaka fahazoan-dalana. Hisokatra ny vavahadin’ny sakana rehefa fantatra ny laharan’ny laharan’ny fiara.
Smart Parking Equipment Fametrahana tapakila fijanonana rafitra fanaraha-maso ny fidirana
Smart Parking Equipment Fametrahana tapakila fijanonana rafitra fanaraha-maso ny fidirana.Masinina fanontam-pirinty milina fanontam-pirinty manan-tsaina ho an'ny Parking Lot SystemNy rafitra IC / ID Card dia mitovy amin'ny rafitra tapakila, ovay fotsiny ny tapakila amin'ny karatra IC / ID izay mila angonina rehefa vita ny fandoavam-bola.Ny rafitra fitantanana fiara dia rafitra maoderina sy manan-tsaina amin'ny fitantanana fiara. Izany no be mpampiasa amin'ny trano fonenana, birao, toeram-pivarotana lehibe, hopitaly sy ny toerana ho an'ny daholobe hafa ho an'ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana, fitantanana sy ny fidiram-bola generation.It dia afaka manatsara be ny fahombiazan'ny ny fiantsonan'ny fiara, manamafy ny fiarovana fiara, mampihena ny mpiasa sy ny vidiny, ary hisorohana ny hosoka, koa mahazo tombony sy fidiram-bola ho an'ny mpitantana ny fiantsonan'ny fiara.Ny TGW dia manome ny fitaovam-piantsonan'ny fiara sy ny vahaolana hamahana ny olan'ny fiantsonana anao, izay ao anatin'izany ny rafitra fijanonan'ny fiara RFID / kaody bar code, rafitra fiantsonan'ny karatra RFID lavitra, rafitra fiantsonan'ny ANPR, milina fandoavam-bola.
Kiosk fandoavam-bola amin'ny fiara tsara kalitao avo lenta miaraka amin'ny mpamaky kaody bar
MILINA FIVAVAHANA.Toetoetra:FiarovanaNy varavarana lehibe dia mihidy amin'ny hidin-trano fiarovana elektronika sy ny rafitra crossbar hidin-trano. Ary ny hidin'ny fiarovana elektronika dia mila manokatra amin'ny alàlan'ny karatra sy ny tenimiafina an'ny mpitantana.Ny boaty fiarovana amin'ny vola dia manana module azo antoka misaraka. Ny hatevin'ny boaty dia 4-5mm, ary ny boaty fiarovana amin'ny vola dia mihidy amin'ny hidin-tranony manokana.Vola madinika fandoavam-bola azo ampiasaina, faktiora, banky/carte de crédit, Quick PassAvailable Babknotes Input$5, $10, $20, $50, $100Vola vola misy$1, $5, $20Misy Coin Input$1, $5, $10Vola vola misy$0.5, $1Find me Function hahitanao ny fiaranaoIty fiasa ity dia manokana ho an'ny toeram-piantsonan'ny fiara izay manana rafitra fitarihana horonan-tsarimihetsika fiara sy rafitra famantarana ny takelaka fahazoan-dàlana. Ampidiro ny laharan'ny fahazoan-dàlana ho an'ny fiaranao, ny efijery 22" HD LCD Touch dia hampiseho ny toerana tena misy ny fiaranao eo amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara miaraka amin'ny sarintany elektronika, ary koa mampiseho ny fomba tsara indrindra hahazoana ny fiaranao.Fanairana fahasimbanaNy milina dia manana fakan-tsary ho an'ny fanaraha-maso ary manana sensor infrarouge. Afaka mirakitra an-tsoratra ireo izay miasa izany. Ary rehefa misy manapaka izany dia avy hatrany dia maneno mafy mafy, ary manome famantarana fanairana ho an’ny foibem-pitantanana.Mety amin'ny fiantsonan'ny fiara ao amin'ny vondrom-piarahamonina fonenana, orinasa sy andrim-panjakana, trano fandraisam-bahiny, trano ara-barotra, fikambanana governemanta, orinasa lozisialy, hopitaly, vohitra, tsena miantsena, sy ny sisa.Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd Professional High Quality Smart Car Parking Payment Kiosk miaraka amin'ny Barcode Reader ho an'ny mpanamboatra fandoavam-bola mandeha ho azy, ekipa teknikan'ny mpandeha an-tongotra matihanina sy mahomby, manohana vahaolana tsy manara-penitra
Fitantanana fiara mivarotra mafana Anpr / Lpr / Alpr Camera Parking System TGW-LAV4
Fakan-tsary Lpr/Anpr/Alpr tsara indrindra Mpanamboatra TGW-LBV2 Automatic Vertical Parking System Solution
Ny teknôlôjia famantarana ny takelaka fahazoan-dàlana (LPR) dia mifototra amin'ny teknolojia informatika, fanodinana saryteknolojia, ary ny faneken'ny fuzzy hanamboarana ny toetran'ny maodely fiara, hamantatra ny toetran'ny fiara,toy ny Plate, modely, loko, sns. Afaka manala ho azy ny sary takelaka amin'ny sary, mampiasa ny sary mandrosony teknolojia fanodinana, ny fanekena ny lamina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny fampahalalam-baovao sy ny fanodinana sary voaangona, dia azo atao izanyhamantatra ny laharan'ny takelaka fahazoan-dàlana, litera ary tarehin-tsoratra sinoa, ary omena mivantana ny valin'ny fanekena, dia manao ny rafitralasa zava-misy.
Automatic lpr ip camera license plate recognition guide parking TGW-LFV2
TGW-LFV2.Ny famolavolana dia mitaky fahaiza-manao maro. Ankoatra ny fahalalana fototra toy ny Kinematics sy Mechanisms, dia misy ihany koa ny sary ara-teknika sy ny Engineering-Aided Engineering (CAE).Ny teknôlôjia famantarana ny takelaka fahazoan-dàlana (LPR) dia mifototra amin'ny teknolojia informatika, fanodinana saryteknolojia, ary ny faneken'ny fuzzy hanamboarana ny toetran'ny maodely fiara, hamantatra ny toetran'ny fiara,toy ny Plate, modely, loko, sns. Afaka manala ho azy ny sary takelaka amin'ny sary, mampiasa ny sary mandrosony teknolojia fanodinana, ny fanekena ny lamina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny fampahalalam-baovao sy ny fanodinana sary voaangona, dia azo atao izanyhamantatra ny laharan'ny takelaka fahazoan-dàlana, litera ary tarehin-tsoratra sinoa, ary omena mivantana ny valin'ny fanekena, dia manao ny rafitralasa zava-misy.
LPR / ANPR HD Camara Lozisialy famantarana ny takelaka fahazoan-dàlana fiara miaraka amin'ny fiantsonan'ny vavahady mandeha ho azy TGW-LGV2
Matihanina LPR/ ANPR HD Camara Fiara Lozisialy famantarana ny fahazoan-dalana fahazoan-dalana amin'ny vavahady fiara mpanamboatra TGW-LGV2. mandeha amin'ny dingana fanaraha-maso hentitra ny kalitao, ao anatin'izany ny fanamarinana ny lesoka sy ny lesoka amin'ny lamba, ny fiantohana ny loko marina, ary ny fanamarinana ny tanjaky ny vokatra farany.
Rafitra fanaraha-maso ny fidirana amin'ny fiantsonan'ny fiara mandeha ho azy miaraka amin'ny fanekena takelaka fahazoan-dàlana amin'ny fakantsary HD TGW-LHV4
TGW-LHV4.Ny vokatra dia mihoatra ny vokatra mitovy amin'izany amin'ny fiasa sy ny kalitao.Ahoana ny fiasan'ny rafitra fiantsonan'ny fiara LPR1. Eo am-pidirana: Misy fiara mandeha eo anoloan'ny fidirana, eo anoloan'ny sakana. Ny fakan-tsary dia mahafantatra sy mirakitra ny isan'ny takelaka, ny daty sy ny fotoana idirana amin'ny rindrambaiko,. Miakatra ny sakana fidirana ahafahan'ny mpamily miditra amin'ny fiantsonan'ny fiara. Mianjera ho azy ny sakana rehefa mandalo ny fiara.2. Amin'ny fivoahanaFiara iray mijanona eo amin’ny fivoahana, mialohan’ny sakana. Ny fakan-tsary dia manaiky ho azy ny lovia, avy eo ny rindrambaiko dia ho atomika ny saram-piantsonan'ny fiara sy ny aseho eo amin'ny LED fampisehoana, ny mpamily nandoa ny fiantsonan'ny fiara, ny fivoahana sakana niakatra, mamela ny mpamily handao ny parking . Midina ho azy ny sakana rehefa mandalo ny fiara.